Kontoroolka xaduudaha Sweden oo maalinkii labad halkiisa ka sii socda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kontoroolka xaduudaha Sweden oo maalinkii labad halkiisa ka sii socda
La daabacay fredag 13 november 2015 kl 11.22
Maalinkii labaad waxaa halkeeda ka sii socda kontoroolka dadka ka soo tillaabaya xaduuda Sweden.
Waxay aheyd habeynimadii arbacadii markii dowladda Iswdhen ku dhawaaqday kontorool in ay ku soo rugtay xaduudaha koonfureed ee dalka, lana kontoroolayo aqoonsiga dadka ka soo tillaabaya xaduudda. Hyllie waa xuduuda koobaad ee uu istaago tareenka iskaga kalo goosha Malmö iyo Copenhagen. Boliiska ayaa dhamaan gelaya tareenada markay halkas soo istaagan si ay u kontoroolaan dhamaan dadka saaran sida uu sheegay weriye Cleas Aronsson.
- Waxaan tagay maxadada Hyllie oo ah maxado uu boliiska ahmiyad gooni ah saaray. 30 boliis ah ayaa halkan ka howl-galaysa, waxayna galayaan tareen kasta oo ka yimaada Danmarka. Maxadada Hyllie waa maxadada koobad dhanka Sweden ee uu istaago tareenka ka yimaada Danmark, ayuu yeri Cleas Aronsson oo ka howl-gala raadiyaha Sweden, isagoo goobtas ku sugana noo warameyey.
- Waxaan aragnay in ay kontorolayeen tareen kasta iyo dhamaan rakaabka saaran , sababtana waxay tahay in aysan takoorin cidna oo dhamaan dadka oo dhan ayaa laga doonayaa in ay boliiska tusaan aqoonsigooda
- Kuwa aan waddan aqoonsi sax ah waa laga dejinayaa tareenka, waxaana lagu gurayaa basaska boliiska wato oo lagu geynayo goobaha ay hey’adda socdaalka sal-dhiga ku leedahay, halkas oo ay ka dalban karaan magangeliyo.
Maxadada bartaha Malmö, bilahii ufgu denbeeyey la ciirciireysay qaxooti badan oo halkas soo gaarayey ayaa laga dareemayaa in saameynta kontorolka xaduuda Sweden. Malmö Central waxaa ku yaraaday qaxootigii soo gaarayey. Sidas waxaa laanta P4 Malmö u xaqiijiyey Mårten Gunnarsson oo madax ka ah aqalka postada ee Malmö Central.
- Aad bay u yaraadeen tiradii na soo gaaraysay. Intooda badan waxaa lagu joojiyaa Hyllie, kaddibna halkas ayaa gaadiid looga daldalaa oo la geeyaxarunta hey’adda Socdalk Migrationsverket, ayuu yer.